သိ​သင့်​တာ​နှင့် ​အ​ဖြေ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Dennis Martin : Before Agape he got one Virus i also got likeathat virus at the time i also i can't run Antivirus App If i run ,virus close Anti Virus App may be same problem at the time my computer is toooo much slow so i make with Avril Premium i can't found any virus than i take kasparsky from one of my Russia friend, i run with that but i can't find any virus . so after i use Norton 2010 from your web after i find alot of virus now is everything is OK but some time if i don't use any program my Processor is running around 100%. i think some thing wrong so i hope you will help me I'm waiting with Team Viewer By the way if you need some program & info you can go to this link i got from my Russia friend they use from those link some app are only Russia language .web page ​တွေ​ကို Page ​လိုက် translate ​လုပ်​ပေး​နိုင်​မယ့် Program ​လေး​လဲ​လုပ်​ပေး​ပါ​ဦး
(၁) window operation system ​မှာ antivirus program ​ကို ​တစ်​ခု​ထက်​ပို​ပြီး ​မ​သုံး​သင့်​ပါ​ဘူး microsoft ​က​လဲ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ကြောင်း​ကို ​သ​တိ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​ကို​သ​ဘော​ကျ ​နှစ်​သက်​တဲ့ anti virus program ​တစ်​ခု​ခု​ကို ​သုံး​ပါ . ​ကျွန်​တော်​က​တော့ kaspersky 2010 ​ကို​သုံး​ပါ​တယ် . ​လူ​သုံး​လဲ​များ ​တဲ့​အ​ပြင် security ​ဖက်​ပိုင်း​နဲ့ ​တစ်​ခြား​အား​သာ​ချက်​တွေ​မှာ kaspersky ​က ​နံ​ပါတ်(၂) ​နေ​ရာ​မှာ ​နေ​ရာ​ယူ​ထား​ပါ​တယ် .
(၂) ​နောက်​တစ်​ခု​က processor ​က 100% ​ဖြစ်​နေ​တယ်​ဆို​တာ​က​တော့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​ဖွင့်​ပြီး​သုံး​နေ​စဉ်​အ​တွင်း program ​ကို ၂ ​ခု ​လောက်​ပဲ​ဖွင့်​ပါ ​မ​လို​အပ်​ပဲ program ​တွေ​လဲ ၄-၅ ​ခု ​ဖွင့်​ထား​မယ် . ​သီ​ချင်း​လဲ​နား​ထောင်​မယ် . ​တစ်​ချိန်​တည်း​မှာ​ပဲ virus ​စစ်​နေ​မယ်​ဆို​ရင် 100% ​ပါ ​ကျော်​ချင်​ကျော်​သွား​နိုင်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ ​တစ်​ခု​သ​တိ​ထား​စေ​ချင်​တာ​က virus program ​တစ်​ခု​ခု​နဲ့ full scan ​စစ်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ဖွင့်​ထား​သ​မျှ program ​တွေ​ကို ​ပိတ်​မယ် . Download ​လုပ်​ထား​တာ​တွေ​ကို ​ရပ်​ဆိုင်း​ထား​မယ် . ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​အား​လုံး​အ​နား​ပေး​ထား​တဲ့ ​အ​ချိန်​ကျ​မှ virus ​စစ်​ပါ . ​လုပ်​ငန်း​လုပ်​နေ​တဲ့​အ​ချိန် virus ​မ​စစ်​ပါ​နဲ့ . ​လုပ်​ငန်း​ကျန့်​ကြာ​စေ​တဲ့​အ​ပြင် ​လုပ်​ငန်း​တွေ ​မ​တန်​တ​ဆ ​ခိုင်း​ထား​ခြင်း​ဖြင့် cpu ​ရဲ့ heat ​လဲ ​တက်​လာ​နိုင်​ပါ​တယ် . ​ဒါ​လေး​ကို​သ​တိ​ထား​ပေး​ပါ .
(၃) ​နောက်​တစ်​ခု​က WEBSITE (​အ​ခြား​ဘာ​သာ​များ​ဖြင့်​ရေး​သား​ထား​တဲ့) ​တွေ​ကို ​အ​င်္ဂ​လိပ်​ဘာ​သာ​နဲ့ ​ကြည့်​ချင်​ရင် ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ဖတ်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် ​ဒီ​ဆိုက် ​ကို ​သွား​လိုက်​ပြီး​တော့ ​လက်​ရှိ​ရှိ​နေ​တဲ့ language ​က​နေ ​ကို​လို​တဲ့ language ​အ​မျိုး​အ​စား​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပြီး translate ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
Coconunt Blue May 15, 2013 at 10:52 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျား ​ကျွန်​တော်​လက်​တော့​က ​အင်​တာ​နက်​က ​ဗွီ​ဒီ​ယို ​တွေ​ကို ​ကြည့်​လို့​မ​ရ​ဖြစ်​နေ​လို့ ​ဝင်း​ဒိုး​ပ​လေ​ယာ​လည်း​ရှိ​တယ် ​အစ်​ကို ​အ​ပန်း​မ​ကြီး​ရင်​ကူ​ညီ​ပေး​စေ ​ချင်​ပါ​တယ် ​စောင့်​နေ​ပါ​မည်။